Inwe echiche banyere otú n'ihu echekwa fun ugboro weghaara na gị iPhone ma ọ bụ iPad ma ọ bụ Mac? The abụọ nhọrọ na-akacha eji na-iMovie ma ọ bụ iDVD. Abụọ ndị a software ike ga-eji iji nweta ihe ị chọrọ na ike ga-eji ọnụ ma ọ bụ n'otu n'otu. Ime a nhọrọ n'etiti iMovie na iDVD adabere na otú ị chọrọ dezie gị videos.
iMovie bụ a software na-eji maka edezi videos bụghị nanị na gị Mac, kamakwa na gị iPhone ma ọ bụ iPad, ebe i nwere ike ibelata video ma ọ bụ splice ya ọnụ ọzọ ikwe gị iduzi otú video-aga. Ọ bụrụ na ị chọrọ mma gị videos ime ka ọdịnaya mfe ịgbaso ma ọ bụ nanị tinye visuals, iMovie bụ nri ngwá ọrụ gị.
N'aka nke ọzọ, iDVD bụ a software na i nwere ike na-eji nanị na gị Mac, o doro anya na n'ihi na iPads na iPhones adịghị nwere ohere DVD mere ka ọkụ diski. Ọ na-ahapụ ị na-akpali a okokụre video si gị Mac ka a DVD. Ọ nwere ike na-bee gị video n'ime isi nke mere na ọ bụ mfe ịnyagharịa, ka ịhazie foto àgwà n'ihi na mma ikiri, na nwekwara ike menus dị ka ihe ị na-na mkpọsa DVD.
Ma ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eme ma ọ bụ na-adịghị eji iMovie, ị ka ga mkpa iji iDVD ịkwaga gị nkiri ka a diski maka aba ọsọ. Ọzọ uru nke iji iDVD n'elu iMovie bụ na i nwere ike ịkọrọ diski na ndị enyi gị na-adịghị efe a Mac, na-eme ka ọ na ihe obere uru.
Olee otú mbupụ iMovie ka iDVD
Ọ bụrụ na gị na oru ngo ntọala na-melite n'ụzọ ziri ezi, a ga-enwe kasị mma video ekwe omume n'ihi na gị na oru ngo. Ị nwere ike mgbe e mesịrị-eji nke a MOV maka ọkụ DVD iji iDVD. E nwere ihe ole na ole dị mfe nzọụkwụ mkpa ka i soro mere na usoro zuru ezu.
Nzọụkwụ 1: The Nzọụkwụ mbụ bụ pịa Share> 'Export iji QuickTime ...'
Nzọụkwụ 2: The Export mkparịta ụka igbe kwesịrị egosi ugbu a; na ngalaba 'Save dị ka:' họrọ a gị aha video, na ngalaba 'Olee ebe:' họrọ ebe ebe ị ga-achọ chekwaa faịlụ, na na ngalaba 'Export:' jide n'aka na nhọrọ nke 'Movie ka QuickTime Movie 'họrọ. Ozugbo mere, pịa bọtịnụ 'Nhọrọ'.
Nzọụkwụ 3: Site ọzọ popup window akpọ 'Movie Ntọala', pịa 'Ntọala ...' n'okpuru Video ngalaba.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, họrọ H.264 ka mkpakọ Ụdị na mgbe ahụ ịgbanwe ọzọ ntọala ka e gosiri n'okpuru.
Etiti ọnụego: 29,97
Key Frames: ọ bụla 30 okpokolo agba
Etiti Reordering:-achịkwaghị achịkwa
Compressor: Faster encode (Single-Pass)
Data ọnụego: Machibido 1500 Kbits / Sec
Ozugbo mere, pịa bọtịnụ OK.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a, pịa na Size button n'okpuru Video ngalaba, nke kwesịrị imeghe Export Size Ntọala maka gị.
Họrọ '1920 x 1080 HD' n'ihi na 1920x1080 ma ọ bụ 1440x1080 (1080p) videos, '1280 x 720 HD' n'ihi na 1280x720 (720p) videos, ma ọ bụ '640 x 480 VGA' n'ihi na 720x480 (SD) videos maka Dimensions wee pịa OK.
Nzọụkwụ 6: The ikpeazụ nzọụkwụ bụ pịa Save. Ozugbo na e mere, ị ga-ahụ a na-enwe ọganihu mmanya ka hụrụ na oyiyi n'okpuru na-agwa gị ihe oge na-ekpe maka usoro nke exporting na-ezu. Ruo mgbe dum usoro a na-eme, zere na ịpị kagbuo bọtịnụ.
Olee otú Ọkụ iMovie ka DVD
The DVD, a makwaara dị ka a Digital vasatail Disc e formatted, mepụtakwara, mepụtara ihu ọma na-echekwa ụdị ọ bụla nke dijitalụ data, n'ọtụtụ ebe na maka software na ndị ọzọ na dijitalụ faịlụ, video faịlụ, Ịgba Cha Cha faịlụ na n'ihi na otú ọtụtụ ndị ọzọ na nzube. Ọ na-eme òkè nke data dị mfe. Na ojiji nke a DVD mkpa maka Wi-Fi / ọ bụla ọzọ internet isi iyi na-ebelata. Ọ bụla na ngwaọrụ, ọ bụla nlereanya na nwere oghere maka a DVD na ya nwere ike na-ele ozi na diski.
iMovie na aka nke ọzọ bụ a video edezi software maka Mac na IOS, nke pụtara na ọ nwere ike ga-eji na iPhones, iPads, iPod Obere, na iPad aka. iMovie ihu ọma na-eji mbubata ọtụtụ iche iche nke faịlụ ka Mac ma ọ bụ site a ike mbanye. Ọ nwere ike na mbubata vidiyo ma ọ bụ foto, na-ekwe ka onye ọrụ tinye utu aha, gburugburu, agba, music, na mmetụta ndị slides.
Ya mere, ka anyị hụ otú mfe ma dị mfe ọ bụ nyefee iMovie na na DVD nnọọ ole na ole dị mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: tọghata iMovie Project ka MP4 iji QuickTime - The mbụ ụzọ nyefee iMovie video ka MP4 bụ site na iji atụmatụ nke iMovie onwe ya. N'okpuru ebe a bụ ihe zuru ezu ntụziaka na converting iMovie ka MP4 na iMovie. Ozugbo na e mere ihe niile ị chọrọ ime bụ Launch iMovie. Pịa "Share> Export iji QuickTime" na n'elu menu mmanya.
Mgbe ahụ a window aha ya bụ "Save exported faịlụ dị ka ..." Pop elu. Pịa "Export" nhọrọ ma na-achọta "Movie ka MPEG-4" ke dobe ala menu. Ọ bụrụ na ị mkpa ka ịgbakwunye ụfọdụ ntọala na faịlụ video format, ị nwere ike pịa bọtịnụ Mwube; bụrụ na ọ bụghị, ozugbo kụrụ on "Save" button mbupụ a .mp4 faịlụ site iMovie.
Nzọụkwụ 2: Pịa ebe a ibudata na ịwụnye Wondershare Video Converter Ultimate na kọmputa gị, ihe ndị magburu onwe software na-ahapụ gị tọghata, welie, dezie, ọkụ, download, kpọọ, hazie na ọbụna egwu ọ bụla vidiyo na Mac na Windows ma. Ọ bụ ma ama n'ihi ịbụ otu n'ime ihe ndị kasị converters, na gbapụrụ ọsọ ruo 30 ugboro ngwa ngwa karịa ya mpi, na kwa bụ ihe magburu onwe video Downloader. Ị ga-akwa ụta na-aga n'ihi na onye a nke a ụdị nile-na-otu video toolbox si Wondershare.
Nzọụkwụ 3: Bubata M4V - Mgbe launching a M4V video Ntụgharị, i kwesịrị mbubata faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. Ime ya, ị ga-aga na taabụ 'tọghata' na mgbe ahụ Njikwa> 'Ibu Ibu Media faịlụ ...' ma ọ bụ, Nhọrọ, ị nwekwara ike họrọ nhọrọ nke 'Ibu Ibu DVD faịlụ ...' dị nnọọ bụrụ na faịlụ na ị chọrọ iji na-na a DVD. I nwekwara ike pịa na obere '+' ịrịba ama ma ọ akara, nyere na ala ekpe n'akụkụ aka nke ngwa interface na-agagharị na bulite video faịlụ site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 4: Ịhọrọ a template - Ozugbo i ọma dị video faịlụ na ị chọrọ ọkụ na DVD, pịa na taabụ 'Ọkụ' site n'elu nke interface na mgbe ahụ họrọ nhọrọ nke 'Ọkụ' na ngalaba ' Task: ', ị ga-ahụ ya kwupụta n'elu nri n'akụkụ aka nke interface. Nke a bụkwa window ebe ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla nke ọkacha mmasị gị DVD menu ndebiri tupu na-ere ọkụ na DVD; ị ga-ahụ nhọrọ na ala nke ihuenyo.
Nzọụkwụ 5: Ọkụ ka DVD - The ndị ikpeazụ, ndị ikpeazụ nzọụkwụ na-ere ọkụ gị faịlụ n'elu DVD na otú ị nanị nwere kụrụ na 'Ọkụ' button gosiri na nri ala nke ihuenyo na Wondershare Video Converter Ultimate ga-eme ndị ọzọ maka gị.
> Resource> DVD> Olee ịkọrọ na ọkụ iMovie ka iDVD